07.07.2018 ရက်နေ့တွင်ကျင်းပသော ညီညွတ်သောဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ-UDP မှ လှူဒါန်းသည့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊မှော်ဘီမြို့နယ်၊အင်းလျက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရေပြာကျေးရွာနှင့် သဲဖြူကျေးရွာ ကွန်ကရစ်လမ်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ | UDP Myanmar
07.07.2018 ရက်နေ့တွင်ကျင်းပသော ညီညွတ်သောဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ-UDP မှ လှူဒါန်းသည့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊မှော်ဘီမြို့နယ်၊အင်းလျက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရေပြာကျေးရွာနှင့် သဲဖြူကျေးရွာ ကွန်ကရစ်လမ်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ
28.05.2018 ရက်နေ့တွင်ကျင်းပသော ညီညွတ်သောဒီမိုကရက်ပါတီ-UDP မှလှူဒါန်းသည့် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ဖြူးမြို့နယ်၊ခင်ရှည်ကျေးရွာ လမ်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ
25.05.2018 ရက်နေ့တွင်ကျင်းပသော ညီညွတ်သောဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ-UDP မှလှူဒါန်းသော ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ဇီးကုန်းမြို့နယ်၊၀က်ကော်အောက်ရှမ်းစုကျေးရွာ ကျောက်ခင်းလမ်းဖွင့်ပွဲနှင့် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ကြို့ပင်ကောက်မြို့နယ်၊စီကောက်ပင်ကျေးရွာ မြေနီိလမ်း ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား၏ မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ
ညီညွတ်သောဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ-UDP မှမှော်ဘီမြို့နယ်၊ညောင်တံခါးကျေးရွာတွင် အမှိုက်ကန်ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းပေးသည့်မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ
ညီညွတ်သောဒီိမိုကရက်တစ်ပါတီ-UDP နှင်းဆီပါတီ ဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်မြင့်(ကိုယ်စား) ဗောဓိတစ်ထောင် နာယကဆရာတော်ဦးသြဘာသ ထံအလှူငွေ ပေးအပ်သည့် မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ
UDP ပါတီ၏အခြေခံ မူဝါဒ (၆)ရပ်
(ခ) တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး
(ဃ) မြန်မာပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံးစားဝတ်နေရေးနှင့် လူနေမှုဘ၀မြှင့်တင်ရေး
(င) ဆင်းရဲမွဲတေမှုပပျောက်စေပြီး ဆင်းရဲသားအားလုံး စားဝတ်နေရေး ၊ အလုပ်အကိုင် ရရှိရေးနှင့် အခြေ
UDP Myanmar ရုံးချုပ်
နေပြည်တော်ရုံးချုပ် - အမှတ် (၁၅၂၂)၊ လင်းနို့ ဝင်းကွင်း၊ ဇီးကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပုဗ္ဗသီရိမြို့ နယ်၊ နေပြည်တော်။
၀၆၇ - ၅၀၀၂၃၅, ၀၆၇ - ၅၀၀၂၃၆, ၀၉ ၂၅၀ ၅၃၀ ၉၈၉
အမှတ်(၉၈)၊ အောက်ဗဟိုလမ်းနှင့် မာလာမြိုင်(၇)လမ်းထောင့်၊ လှိုင်မြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
၀၉ ၂၅၃၇၅၀၉၂၅, ၀၉ ၂၅၀ ၇၉၉၄၁၂
Copyright ©2015 to 2025. All rights reserved by UDP Myanmar. Power by Myanmar Web Developer